Nin iibiya hilibka Waraabaha oo gacanta lagu dhigay | KEYDMEDIA ONLINE
Nin iibiya hilibka Waraabaha oo gacanta lagu dhigay
Wuxuuna intaa raaciyay in lamar-siin doono raggan sharciga, isaga oo uga digay ganacsatada iibisa xoolaha in ay ka fogaadaan waxyaabahan oo kale.
QORYOOLEY, Soomaaliya - Howlgal ay sameeyeen laamaha amniga degmada Qoryooleey ee gobolka Shabeellaha hoose ayay ku soo qabteen shaqsiyaad hilibka Waraabaha si qarsoodi ah ugu dhex iibin jiray gudaha suuqa dagmada, iyaga oo ku dhex milayay Hilibka xoolaha kale si dadku aysan u kala garan.
Hilibka Waraabaha iyo Shaqsigii iibinaayay oo kamid ah dadka ku nool Qoryooleey ayaa lagu guuleystay in gacanta ay ku soo dhigaan saraakiisha ammaanka Qoryooleey.
‘‘Hilibkan Waraabaha bannaanka magaalada ayay ku soo qali jireen, kaddibna magaalada ayay u soo iib geyn jireen, gaar ahaan kawaanka, hayeeshee ciidamada amniga ayaa ka warhelay howsha aan wanaagsaneyn ee ay hayaan, nasiib wanaag waxaa inoo suuragashay inan gacanta ku soo dhigno Hibka Waraabaha iyo raggii ku howlanaa ka ganacsigiisa’’, ayuu yiritTaliye ku xigeenka ciidanka amniga degmada Qoryooleey Ibraahim Hadaafow.
Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ah guddoomiyaha degmada Qoryooleey ayaa ciidamada ammaanka ku bogaadiyay sida ay xilli walba ugu howlan yihiin ilaalinta amniga iyo badqabka Shacabka, bulshada reer Qoryooleey ayuu ka dalbaday inay ciidamada kala shaqeeyaan amniga iyo wax kasta oo wax u dhimi kara badqabkooda.
Arrintan waxa ay wal-wal badan ku dhalisay dadka ku nool degmada, kuwaas oo is weydiinaya in Hilibka Waraabaha ka mid ahaa hilbihii ay dhawaanahan ka soo iibsan jireen Kawaanka hilibka xoolaha ee Qoryooley,taas oo shaki badan ku dhalisay bulshada ku dhaqan dagmada Qoryooleey.
Bartamihii bishii August ee sannadkii 2012, Al-Shabaab ayaa dadka ku nool magaalada Kismaayo u sheegay in ay cuni karaan Hilibka Waraabaha oo uu xalaal yahay, taas oo keentay in si cad loogu iibiyo suuqa hilibka iyo maqaayadaha. Muran fara badan oo ka dhashay arrintaa waxa ay gaartay in ay ka hadlaan Culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, mid ka mid ah waa Shiikh Maxamed Cabdi Umal oo sheegay in cunista hilibka Waraabaha uu yahay mid bannaan oo la cuni karo, isla markaana ay banneysay diinta Islaamka, waase nuuc gooni ah oo ka mid Waraabaha.